Amanqaku kaLiz Greene malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu ULiz Greene
U-Liz Greene uyinja enothando, efunda ngembali, inkcubeko ye-pop evela kwiSixeko esihle seMithi, eBoise, eIdaho. Unokuzibamba izinto ezimbi kuye kwibhlog yakhe, Ngokukhawuleza uLo.
Imithombo yeendaba yeNtlalontle ephawulwe kumava abaThengi
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 16, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 ULiz Greene
Xa amashishini aqala ukungena kwilizwe losasazo lwasentlalweni, lalisetyenziswa njengeqonga lokuthengisa imveliso yabo kunye nokunyusa ukuthengisa. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, nangona kunjalo, imithombo yeendaba zentlalo ziye zangena kumgangatho othandwayo woluntu oluku-intanethi-indawo yokunxibelelana neempawu abazithandayo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, kukufuna uncedo xa benemicimbi. Abathengi abaninzi kunanini na ngaphambili bajonge ukunxibelelana neempawu kusetyenziswa imidiya yoluntu, kunye neyakho